Home Muraayad COVID19 iyo awoodaha baasaboorada Geeska Africa. Yaa hadda ugu sarreeya?
Sida ay u kala awood badan yihiin baasaboorrada Soomaaliya, kenya, Jabuuti iyo Itoobiya
Cudurka safmarka ah ee Covid19 ayaa aad u saameeyay isu socodka bulshooyinka caalamka, taas oo hoos u dhigtay dhaqaalaha wadamada adduunka oo idil, waxayse aad u taabatay wadamada dhaqaalahoodu toos ugu tiirsanaa dalxiiska.
Sida lagu daabacay bogga passport index oo laga leeyahay wadanka Canada ayaan ku ogaanay in sanadkii 2019, ka hor inta Covid19 uusan dunida ku faafin, Baasaboorka Soomaaliga ayaa gaaray meeshii ugu sarraysay abid oo ahayd in lagu tagi karay 41 wadan visa la’aan ama visaha la qaato markii aad ka dagtid wadanka aad u socotid oo loo yaqaano Visa on arrival.
Baasaboorka Jabuuti ayaa waxaa 2019 lagu tagi karay 56 wadan, halka kan Ethiopia lagu tagi karay 50 wadan. Waxaa ugu awood sarreeyay baasaboorka wadanka Kenya oo u sahlayay dadka wata in ay tagaan 74 wadan iyaga oon laga rabin in ay visa sii qaataan.
Xaalada Covid19 ayaa kaliftay in waddamada adduunka ay albaabada kala xirtaan, waxaa aad u yaraaday safarada caalamka sanadkii tegey ee 2020. Haddase waxaa si tartiib ahi usoo noqonaya isusocodka adduunka kadib markii ay bilaawdeen talaalada cudurka iyo waddamada oo khibrad u yeeshay in ay ilaaliyaan faafitaanka iyagoo adeegsanaya tallaabooyinka ka hortaga cudurka, sida shuruudaha baaritaanka cudurka oo khasab laga dhigay iyo karantiilka.
Awoodda baasaboorada Geeska Africa 2021
Is barbar-dhiga baasaboorada Geeska Afrika
Baasaboorka Soomaaliga ayaa lumiyay 7 waddan, waxaana hadda lagu tagi karaa 34
Wadamada ugu muhiimsan ee aad hadda ku tagi kartid viiso la’aan waxaa ka mid ah:
Baasaboorka Jabuuti ayaa lumiyay 11 wadan oo 2019 kii lagu tagi karay, hadda waxaa lagu tagi karaa 45 wadan. Kuwa ugu muhiimsan waxaa ka mid ah:
Baasaboorka Itoobiya ayaa lumiyay 8 dal oo lagu tagi karay 2019 kii. Hadda waxaa lagu tagi karaa 42 dal. Kuwa ugu muhiimsan waxaa ka mid ah:
Baasaboorka Kenya ayaa ugu awood badnaa wadamada Geeska Africa Covid19 ka hor iyo haddaba. Balse wuxuu lumiyay 13 wadan. Waxaana hadda lagu tagi karaa 61 dal, waxaana ka mid ah kuwa ugu muhiimsan:
Halkan ka ogoow is barbar-dhiga oo dhamaystiran.
Previous articleKa hortag oo dib usoo cesho timahaaga adiga oon u baahanin beeridda tinta (Hair transplant)
Next articleWaa maxay NFT? Farshaxanka Internetka oo aad looga taajiray (Layaabkii dunida)